Warshad alxanka qaybo bir ah oo alaab qaali ah iyo alaableyda | Ouzhan
Qalabka guud ee wax soo saarka birta ayaa ah: bir birta ah, bir bir ah, tinplate, bir gu ', naxaas iyo naxaas daawaha ah, magnesium alloy, aluminium daawaha saxan duuban, saxan duuban oo kulul, saxan galvanized, saxanka elektroolka, aluminium, birta aan lahayn, saxan naxaas ah. Caadi ahaan loo isticmaalo waa alxanka korantada iyo alxanka gaaska, iyo sidoo kale alxanka laser, brazing, alxanka kuleylka, alxanka birta korantada, alxanka walxaha qarxa, iwm.
Faa'iidooyinka qaybaha alxanka biraha
- Keydso qalabka birta ah iyo yareynta miisaanka dhismaha;
- Fududeeyo habsami u socodka iyo rakibidda iyo hagaajinta waxtarka wax soo saarka;
- Awood dhismeed sare iyo isku xirnaan wanaagsan; siiyaan dabacsanaan weyn qaabeynta qaabdhismeedka;
- Habka alxanka waa u fududahay farsameynta iyo otomaatiga.
Ouzhan OEM kartoo sheet alxanka adeegga alxanka-Shiinaha Shanghai qaybo alxanka sheet alxanka
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Waxaan ka baaraandegi karnaa qaybaha alxanka xaarka sare ee saxan oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarida qumman ee qaybaha mashiinka alxanka. Intaa waxaa dheer, alaabada alxanka birta ah ee la bixiyo ayaa si adag u hoggaansamaya heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan ah alxanka birta iyo alaabada alxanka macaamiisheena qiimaha leh.
Meelaha arjiga ee alxanka birta ah
Hababka kala duwan ee alxanka ayaa ku habboon alaabooyin kala duwan:
Alxanka gaaska: birta kaarboonka yar, naxaasta adag ee adag, iwm.
Alxanka qaanso elektarooniga ah: birta kuleylka u adkaysata, naxaasta cas, dawalada adag, iwm.
Dhexgalka alxanka qaansoleyda:
Alxanka gaaska kaarboon laba ogsaydhka ah ee gaashaaman: alxanka saxanka khafiifka ah
Argon arc alxanka: titanium alloy, Al alloy, iwm
Alxanka plasma: marinka hawada, sanduuqa wax lagu xiro, iwm.
Alxanka elektaroonigga ah: maraakiibta cadaadiska adag ee darbiga weyn ee kabka-alxanka leh, iwm.
Barxadda alxanka: iskudhaf qaybaha shaabbadaha iyo baararka iskutallaabta, iwm.
Alxanka seam: qaybo bir ah oo khafiif ah
Alxanka Saadaasha: alxanka T-qaabeeya, isgoyska marinka, iwm
Alxanka Butt: biraha, iwm
Alxanka khilaaf: rotors, gacmo, iwm
Qaadashada: birta xawaaraha sare leh, qaybaha injiinka, iwm.
Maxay yihiin isticmaalka qaybaha alxanka birta ah
Ujeedada ugu weyn ee alxamiddu waa in lagu xidho alaabada birta yar yar kuwa waaweyn (sida ku cad sawirada ama cabirka loo baahan yahay), ama samaynta joomatari loo baahan yahay iyada oo loo marayo isku xidhka (alxanka). Alxanka, oo sidoo kale loo yaqaan alxanka ama alxanka, waa nidaam wax soo saar iyo farsamo loogu biiro biraha ama qalabka kale ee termoplastic-ka sida balaastikada iyadoo la adeegsanayo kuleyliyaha, heerkulka sare ama cadaadiska sare.
Faa'iidooyinka adeegga alxanka bir birta ah ee Ouzhan
- Dhammaan walxaha saxda ah ee alxanka saxda ah waxay ku xiran tahay kormeer tayo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro loogu talagalay soosaarida alxanka birta saxda ah.
Hore: Qalabka birta lagu dhejiyo birta
Xiga: Qaybo alxanka sheet bir kartoo